Home > Uncategorized > विदेश पढ्न जान चाहने विध्यार्थीहरूलाई सन्देश !!
करीव पाँच महिना अघि देखि शुरू भएकाे काेराेना महामारी र यसले उब्जाएकाे अन्याैलकाे अवस्था अझै अन्त्य हुन सकेकाे छैन । लामाे लकडाउन र त्यसपछि पनि सुधार हुन नसकेकाे काेराेना प्रकाेपले नेपाल लगायत संसारका सवै देशहरू अाक्रान्त छन् । यसबाट सिर्जित अवस्थाले सवै तह र तप्काका मानिसहरू प्रभावित हुनुका साथै सबै काम धन्दा व्यवसाय चाैपट भएका छन् । देशका कर्णधार मानिने विध्यार्थी वर्ग पनि यसबाट अछुताे हुने कुरै भएन ।
विदेश पढ्न जाने सुन्दर सपना सजाएर बसेका विध्यार्थी वर्गहरू निराश हुन लागे जस्ताे देखिन्छ । तर हामी के कुरामा विस्वस्थ छाै भने याे क्षणिक मात्रै हाे । अहिले केही समयकाे लागि चुनाैतिपुर्ण देखिए पनि यसले विदेश पढ्न जान चाहने विध्यार्थीका लागि ठुला सम्भावना र अवसरहरू ल्याउँदै छ । यसका पछाडि मनासिव कारणहरू छन् । काेराेना भाईरसले गर्दा थलिएकाे विश्व समुदाय काेराेना राेकथाम हुने बित्तिकै जुरूक्क उठ्नु पर्छ र विश्वकाे जाेड त्यसमा नै हुनेछ । जसका कारणले शैक्षिक संस्था लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू चलायमान गरिने छन् । विदेशी विध्यार्थीमा निर्भर विदेशी शैक्षिक संस्थाहरू पनि विदेशी विध्यार्थीलाई अाकर्षण गर्ने खालका विभिन्न खालका अफर लिएर प्रस्तुत हुने छन् । जसमा फिस डिस्काउन्ट, छात्रावृति र हाेस्टेल छुटहरू हुनेछन् । सम्वन्धित देशहरूले पनि भारी मात्रामा छुटका अफरहरू ल्याउने सम्भावना छन् । अष्ट्रेलिया लगायत कतिपय देशले त घाेषणा नै गरि सके । यसका साथै विध्यार्थी भिसाका प्राव्धानहरू पनि खुकुला हुनेछन् । यी सबै कुराहरूकाे फाईदा नेपाली विध्याार्थीहरूले पनि अवश्य उठाउन पाउने छन् ।
व्यापार व्यवसाय चलायमान हुने हुँदा पार्ट टाईम जवकाे अवसर पनि ह्वात्तै बढ्ने छ । Post Study Work का अवसरहरूले पनि विध्यार्थीहरू लाभन्वित हुनेछन् ।
अब विदेश पढ्न जाने विध्यार्थीले के गर्ने त ?
जति पनि विध्यार्थीहरू जाे विदेश पढ्न जाने साेचमा हुनुहुन्छ त्यसका तयारी शुरू गर्न थाल्नुहाेस् । तयारी भन्नाले भाषा कक्षाहरू जस्तै IELTS, TOEFL, PTE अथवा Online उपलव्ध टेष्ट Doulingo अादि गर्न सकिन्छ । यसका साथै कुन देशमा जाने, कुन काेर्स पढ्ने र शैक्षिक प्रणाली र भिसाका प्राव्धानका बारेमा जानकारी लिन शुरू गर्नुस ।
तपाईहरू सबैलाई हाम्राे तर्फबाट सफलताकाे लागि धेरै धेरै शुभकामना छ । धन्यवाद ।